Acccountant | Host Link IT Solution ﻿
20.4.2020, Full time , Computer / IT
- အခွန် ဥပဒေအတိုင်း အခွန်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
- ရေရှည်လုပ်ကိုင် နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- အသက် ၂၂ နှစ်အထက် ဖြစ်ရမည်။
- B. Com / တက္ကသိုလ် မှဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
-LCCI Level I,II & Advance Excel , Word ကိုကျွမ်းကျင် စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
-သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြူံ (၂) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- Finical Account / လချူပ် ရေးဆွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
We offer Salary is Negotiable .
Work location No.3 , Room (A-111), Mahar Swe Codominium , Mahar Swe St, Hlaing Tsp,Yangon
725 Days, Full time , Computer / IT
807 Days, Full time , Computer / IT
Accountant Accountancy Jobs jobless Jobsinyangon.com Host Link IT Solution Co.,Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs IT company Jobs in Myanmar, jobs in Yangon